I-OEM & ODM Spring Matress Double Intengo Yombhede Uhlu lwentengo | Rayson
Ngamandla aqinile we-R & D kanye namandla okukhiqiza, amaRayson manje asephenduke umenzi wobungcweti kanye nomhlinzeki onokwethenjelwa embonini. Yonke imikhiqizo yethu kufaka phakathi umatilasi ophindwe kabili wentwasahlobo akhiqizwa ngokususelwa ohlelweni lokuphathwa kwekhwalithi oluqinile namazinga aphesheya. I-Spring Matress Double Rayson Rayson Riyon ineqembu labasebenza ngezinsizakalo ababhekele ukuphendula imibuzo ephakanyiswe amakhasimende nge-Intanethi noma ngocingo, ukulandelela isimo seLogistics, nokusiza amakhasimende ukuxazulula noma iyiphi inkinga. Ukuthi ungathanda ukuthola ulwazi oluthe xaxa kulokho, kungani futhi senza kanjani, zama umkhiqizo wethu omusha - kufanelekile ukuba umlingani wakho, noma ungathanda ukuzwa kusuka kuwe.rayson kudlula kuchungechunge lwe izinqubo ezilandelanayo. Lezi zinqubo zifaka ukubekwa kwendwangu, ukumaka, ukusika, ukugoqa, ukubheka, ukuqeda, nokucindezela.